तपाईंलाई किन एक SSL प्रमाणपत्र आवश्यक छ? Semalt जवाफ जान्छ!
तपाईंलाई किन SSL प्रमाणपत्र आवश्यक छ? Semalt जवाफ जान्छ!
तपाइँको व्यवसायलाई एक बाट जोगाउनुहोस् आक्रमणकर्ता
तपाईंले पक्कै एक वेबसाइट ठेगाना लाइन को शुरू देखेको छ- HTTP र HTTPS। यी अक्षरहरूले वर्ल्ड वाइड वेबमा डाटा ट्रान्सफर प्रोटोकल स indicate्केत गर्दछ। यो ग्राहकको ब्राउजर र सर्भर बीच डाटा आदानप्रदानको लागि निर्देशन हो, जसले डाटा र प्रकारको सूचना एक्सचेन्ज बीच निर्धारण गर्दछ। HTTP नियमित प्रोटोकल हो जुन पूर्वनिर्धारित रूपमा काम गर्दछ। तपाइँ वेबसाईटमा व्यक्तिगत जानकारी इनपुट गर्नुहुन्छ, र ब्राउजरले यसलाई सर्भरमा सार्दछ। HTTPS डाटा ट्रान्सफर प्रोटोकलको सुरक्षित संस्करण हो, जुन विशेष कुञ्जी लागू गर्दा डिक्रिप्ट गर्न सकिन्छ। यो SSL प्रोटोकोल हो, यसले SSL प्रमाणपत्र को स्थापना सक्रिय गर्दछ। यो तपाइँको साइट को मालिकलाई पठाउनु अघि तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी गुप्तिकरण गर्दछ।
एसएसएलले एसईओलाई कसरी असर गर्छ?
केही वेबसाइटहरूमा, लक छवि दर्शकमा पृष्ठ ठेगानामा पर्दछ। यो कि त सामान्यत: हरियो, सुन, वा खैरो हो। कहिलेकाँही यो लक पार वा पूर्ण रूपमा अनुपस्थित हुन्छ, जबकि अन्य पटक, डोमेन नामको छेउमा फर्मको नामको साथ हरियो रेखा देखा पर्दछ। लक वा हरियो लाइनले संकेत गर्दछ कि SSL प्रमाणपत्र वेबसाइटमा सेट गरिएको छ, र वेबपृष्ठ भित्र सबै जानकारी एक सुरक्षित प्रोटोकल प्रयोग गर्दैछ।
SSL प्रमाणपत्र वार्डले अन्वेन्डर्सलाई खोज आक्रमण वा प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत डेटा बदल्नबाट रोक्दछ: सम्पर्क जानकारी, कार्ड नम्बर, लगइनहरू, पासवर्डहरू, ईमेल ठेगानाहरू, आदि। व्यक्तिगत डेटा लगइनहरू समावेश गर्दछ खाताहरूबाट पासवर्डहरू, बैंक कार्ड नम्बरहरू, इ-मेल ठेगानाहरू, र यस्तै। यसले एसएसएल बै banks्क, वेबशपहरू, भुक्तान प्रणाली, कर्पोरेसनहरू, सामाजिक नेटवर्कहरू, राज्य उद्यमहरू, भर्चुअल फोरमहरू, र यस्तै अन्य वेबसाइटहरूका लागि सहयोगी हो भनेर देखाउँदछ।
< SSL वेबसाइटको मालिकको लागि फाइदाजनक छ। यसको साथ, तपाईं यो निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंको वेबसाइट ग्राहकहरूको लागि सुरक्षित छ। यदि ग्राहकले तपाइँको वेबसाइटमा उनीहरूको व्यक्तिगत जानकारी राख्दछ भने, एउटा SSL प्रमाणिकरणले उनीहरूको जानकारी तेस्रो पक्षसँग साझेदारी गरिने छैन भनेर प्रमाणित गर्छ।
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं छुट्टीको योजना गर्दै हुनुहुन्छ र एयरलाइनको वेबसाइटमा प्लेन टिकट खरीद गर्दै हुनुहुन्छ। अर्डरको लागि भुक्तान गर्न, तपाइँ आफ्नो क्रेडिट कार्ड जानकारी इनपुट गर्नुहुन्छ। तपाईं यसलाई देख्न सक्नुहुन्न, तर ब्राउजरले डाटा सर्वरमा सार्दछ। यदि सन्देश आक्रमणकर्ताहरू समातिएमा, उनीहरूलाई कार्ड डेटा थाहा हुनेछ र वेबमा यसको साथ तिर्न सक्षम हुनेछ।
यसलाई रोक्न, साइट SSL संग सुसज्जित छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्। यदि जालसाजीहरूले प्रमाणपत्रको साथ तपाईंको वेबसाइटमा डाटा खोसे भने, तिनीहरूले केवल एक दुर्घटनाको संकेतको देख्नेछन्। SSL कसरी चल्दछ भन्ने एक उदाहरण दिनुहोस् र कसरी HTTPS जडान Severs विचार गर्नुहोस्।
कुनै पनि ईन्क्रिप्शन टेक्नी कुञ्जीमा स्थापित हुन्छ। कुञ्जी एक सन्देश ईन्क्रिप्ट र डिक्रिप्ट एक तरीका हो। तीन कुञ्जीहरू SSL प्रोटोकोलको काममा भाग लिन्छन्- सार्वजनिक, निजी, र सत्र प्रमाणपत्रहरू:
सार्वजनिक कुञ्जीले सन्देश ईन्क्रिप्ट गर्दछ। दर्शकले यसलाई सर्वरमा प्रयोगकर्ताको डेटा सार्न प्रयोग गर्दछ। उदाहरण को लागी, जब तपाइँ तपाइँको कार्ड जानकारी इनपुट र "भुक्तानी" थिच्नुहुन्छ, यो कुञ्जी सबैको लागि दृश्यात्मक हुन्छ किनकि ब्राउजरले सन्देशमा यसलाई annexes गर्दछ।
निजी कुञ्जीले जानकारी डिक्रिप्ट गर्दछ। यो लागू हुन्छ जब सर्वरले ब्राउजरबाट सन्देश प्राप्त गर्दछ। यो कुञ्जी सर्भरमा अवस्थित छ र कहिले पनि सन्देशको साथ सारिने छैन।
सत्र कुञ्जी सँगै एन्किफरहरू र डेसिफर सन्देशहरू। प्रयोगकर्ताले वेबसाइटमा समय खर्च गर्ने बित्तिकै ब्राउजरले सन्देशहरू सिर्जना गर्दछ। प्रयोगकर्ताले ट्याब बन्द गर्ने बित्तिकै, सत्र समाप्त हुन्छ, र कुञ्जीले काम गर्न रोकिनेछ।
एक प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र अनुरोध भएपछि सार्वजनिक र निजी कोडहरू उत्पन्न गरिन्छ। त्यसकारण, निजी कुञ्जी सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्छ। यदि कुञ्जी अर्को व्यक्तिको हातमा पर्दछ भने, उसले सन्देशहरू डिसेफर गर्न सक्षम हुनेछ, र तपाईंले प्रमाणपत्र पुन: स्थापना गर्नुपर्नेछ। दुई बिभिन्न कुञ्जीहरूको साथ ईन्क्रिप्शन asymmetric भनिन्छ। यो विधि प्रयोग गरेर सुरक्षित छ तर यसले तपाईंको वेबसाइट सुस्त बनाउन सक्छ। त्यसकारण, ब्राउजर र सर्भरले एक पटक सत्र कुञ्जी सिर्जना गर्न प्रयोग गर्दछ। एक-कुञ्जी ईन्क्रिप्शनलाई सममितिक भनिन्छ। यो विधि सुविधाजनक छ तर यो धेरै सुरक्षित छैन। त्यसकारण, ब्राउजरले प्रत्येक सत्रको लागि सर्भरमा सत्रहरू राख्नुको सट्टा एक अद्वितीय कुञ्जी बनाउँछ।
कसरी ब्राउजर र सर्भरले एक सुरक्षित जडान बनाउँछ?
ब्राउजर र सर्भर एक SSL-कनेक्शन व्यवस्था जब एक उपयोगकर्ता एक वेबसाइट का दौरा प्रत्येक बार। यो एक द्रुत जडान हो जुन वेबसाइट अपलोडको क्रममा हुन्छ। यस प्रक्रियालाई "ह्यान्डशेक" भनिन्छ। यो "ह्यान्डशेक" तब हुन्छ जब तपाईले आफ्नो ब्राउजरमा वेब ठेगाना इनपुट गर्नुहुन्छ, यसले सर्भरलाई सोध्दछ कि वेबसाइटको लागि सर्टिफिकेट स्थापना भएको छ कि छैन। प्रतिक्रियामा, सर्भरले SSL र सार्वजनिक कुञ्जीको बारेमा सामान्य जानकारी पठाउँदछ।
ब्राउजरले आधिकारिक प्रमाणीकरण केन्द्रहरूको सूचीको साथ सूचना प्रमाणीकरण गर्दछ। गुगलले यो धेरै राम्रो गर्छ। यदि सबै कुरा क्रमबद्ध छ भने, दर्शकले सत्र कुञ्जी उत्पन्न गर्दछ, यसलाई सार्वजनिक कुञ्जीद्वारा इन्क्रिप्स गर्दछ, र सर्भरमा सार्दछ। सर्भरले त्यसपछि जानकारी डिक्रिप्ट्स र सत्र कुञ्जी बचत गर्दछ। त्यस पछि, HTTPS प्रोटोकल मार्फत दर्शक र वेबसाइट बीच एक सुरक्षित जडान स्थापित हुन्छ।
यो प्रक्रिया अगाडि ढोकाको इन्टरकम मार्फत सञ्चार गर्नु जस्तै हो। तपाईंले कसैलाई भित्र पस्न दिनुहुन्न जब सम्म तपाईं यो व्यक्ति तपाईंको साथी हो भनेर निश्चित हुनुहुन्न। SSL प्रोटोकोलले यस्तै प्रकार्य प्रदर्शन गर्दछ। ब्राउजरले वेबसाइटमा एक सुरक्षित जडान कन्फिगर गर्दैन जबसम्म यो विश्वास दिलाउँदैन कि प्रमाणपत्र नक्कल छैन।
एक HTTPS- जडान निम्न रूपमा काम गर्दछ:
तपाई ब्राउजरमा डोमेन नाम इनपुट गर्नुहुन्छ।
सर्भरले SSL जानकारी र डोमेन नाम पठाउँदछ।
ब्राउजरले यसलाई प्रमाणित गर्दछ, सेसन कुञ्जी सिर्जना गर्दछ, यसलाई सार्वजनिक कुञ्जीसँग एन्क्रिप्ट गर्दछ, र यसलाई पछाडि सार्दछ।
सर्भरले सत्र कुञ्जी डिक्रिप्ट गर्दछ।
अब तपाईको सुरक्षा खतरामा छैन।
तपाईको वेब ठेगाना सुरक्षित गर्नका लागि त्यहाँ बिभिन्न प्रमाणपत्रहरू छन्। सामान्यतया भन्ने हो भने, प्रमाणपत्र अधिक महँगो छ, यो राम्रो छ। मूल्य परीक्षण र टेक्निकल क्षमताको जटिलताबाट प्रभावित हुन्छ। त्यसकारण, जब कुनै एसएसएल छनौट गर्दछ, तपाईको वेबसाइटको आकार र आकारमा ध्यान दिन सिफारिस गरिन्छ। हरियो रेखा सहितको प्रमाणपत्र व्यवसायिक उद्यमहरूका लागि सहयोगी हुन्छ। जबकि, एक सस्तो व्यक्तिगत वेबसाइट वा ब्लगको मालिकहरूको लागि अपरिहार्य हुन्छ। केही उद्यमीहरू केवल वेबसाइटको एक पृष्ठ रक्षा गर्न प्रमाणपत्र खोज्छन्। अरूले एक साथ बहु वेबसाईटहरू वा उनीहरूको सबडोमेन भित्र होमपेजहरूको एक ठूलो संख्याको लागि सुरक्षाको खोजी गर्दछन्।
यसले व्यक्तिहरूको लागि भरपर्दो सुरक्षा प्रदान गर्दछ, साथै:
व्यक्तिगतको लागि वेबसाइट;
वेब अनुप्रयोगको लागि;
भुक्तानी विकल्पहरूको साथ वेबसाइटहरूको लागि;
सानो अनलाइन स्टोरको लागि।
यदि तपाईंको साइट अनलाइन भुक्तानी स्वीकार गर्दछ भने आधारभूत SSL प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दछ। प्रमाणपत्र ईन्क्रिप्ट्स कार्ड जानकारी, पासवर्ड, र प्रयोगकर्ता सम्पर्क जानकारी। आधारभूत SSL मुद्दा १ 15 मिनेट सम्म लिन सक्दछ। यो रिलीज पछि, यो मात्र सक्रिय र स्थापना गर्न आवश्यक छ।
Comodo Basic SSL कुनै कम्पनी कागजातहरू जाँच नगरी किन्न सकिन्छ। स्थापना पछि, आधारभूत SSL स्वचालित रूपमा प्राथमिक डोमेन र सबडोमेन सुरक्षा गर्नेछ। यो स्थापना गर्नका लागि तपाईले लिंक पछ्याउनुपर्नेछ, कोड प्रतिलिपि गर्नुपर्नेछ, र यसलाई विशेष फाँटमा राख्नुपर्नेछ। यस तरिकाले, प्रमाणीकरण प्राधिकरणले सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईं सम्पूर्ण डोमेन नाम नियन्त्रण गर्नुहुन्छ।
जब तपाइँ एक बेसिक एसएसएल प्रमाणीकरण को साथ एक वेबसाइट मा जानुहुन्छ, एक हरियो लक र सुरक्षित HTTPS कनेक्शन आइकन ब्राउजर मा देखा पर्नेछ। Comodo प्रमाणपत्र सबै ब्राउजर र मोबाइल उपकरणहरूमा काम गर्दछ। विश्वसनीय छाप एक ग्यारेन्टी संकेत छ कि एक प्रमाणिकरण अधिकार बाट एक सुरक्षित कनेक्शन छ। जब यो वेबसाइटको गृहपृष्ठमा राखिन्छ, यो ग्राहकहरूको लागि संकेत हो कि उनीहरूको व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित छ।
यदि तपाईंले होस्टिंग प्रदायक परिवर्तन गर्नुभयो भने, निजी कुञ्जी हराउनुहोस्, वा तपाईंको निजी कुञ्जी तेस्रो-पार्टी द्वारा परिचित भयो भने, तपाईंले प्रमाणपत्र पुन: जारी गर्नुपर्नेछ। मूल एसएसएल असीमित संख्याको नि: शुल्क पुनः जारी गर्न सकिन्छ। गुगलका प्रतिनिधिहरूले टिप्पणी गरे कि साइटमा SSL स्थापनाले यसको स्तरलाई असर गर्छ। सुरक्षित साइटहरू खोज ईन्जिनहरूमा पहिलो स्थानमा छन्। २०१ 2014 देखि, एक HTTPS- जडान Google मा वेबसाइट को स्तर को लागी प्रभाव गर्न शुरू भयो। यसको मतलब यो छ कि SSL प्रमाणपत्रको साथ साइटहरूको एक फाइदा हुन्छ जब खोजी परिणामहरूमा देखा पर्दछ।
निजी व्यक्तिको लागि स्तर
डोमेन नाम प्रमाणिकरणको साथ एक एसएसएल साना वेबपृष्ठहरू जस्तै व्यक्तिगत वेबसाइटहरू, ब्लगहरू, वा विषयगत फोरमहरूको लागि सही छ। Semalt विशेषज्ञहरू त्यस्ता प्रमाणपत्रहरूको सिफारिश गर्दछ यदि तपाईंको साइटका ग्राहकहरूले खाताहरू सिर्जना गर्दछ, ईमेलहरूको सदस्यता लिन्छ, पाठ्यक्रमहरूको लागि भुक्तान गर्दछ, र यस्तै।
सानो र मध्यम व्यापारको लागि स्तर
संगठन प्रमाणिकरणको साथ एक SSL एक कर्पोरेट वेबसाइट, सामाजिक नेटवर्क, अनलाईन स्टोर, बीमा, वा ट्राभल एजेन्सीको लागि उपयुक्त छ। । Semalt विज्ञहरू त्यस्ता प्रमाणपत्रहरूको सिफारिश गर्छन् यदि ग्राहकको कम्पनीको वेबसाइटमा व्यक्तिगत जानकारी भण्डारण गर्दछ, अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग पत्राचार गर्दछ, सामानहरू खरीद गर्दछ, वा परामर्शका लागि भुक्तान गर्दछ। संगठन प्रमाणिकरणको साथ प्रमाणपत्र व्यक्ति र कानूनी संस्थालाई जारी गरिन्छ।
ठूलो वाणिज्य उद्यमको लागि स्तर
उन्नत कागजात प्रमाणिकरणको साथ एक एसएसएल राज्य संगठन, ठूलो अनलाईन शप, कार डिलरशिप, घर जग्गा एजेन्सीहरूको लागि उपयुक्त छ। , र एक बैंक वा लगानी कोष वेबसाइट। Semalt पेशेवरहरु त्यस्ता प्रमाणपत्र सिफारिश यदि ग्राहकहरु आफ्नो वेबसाइट को माध्यम बाट पैसा, सेकुरिटी, वा बैंक कार्ड जानकारी भण्डारण गर्दै छन्। आईटी साइटहरूको लागि सिफारिस पनि गरिन्छ जहाँ ठूलो भुक्तानी लिईन्छ, र व्यक्तिगत कागजातहरू अपलोड हुन्छन्। विस्तारित प्रमाणिकरण प्रमाणपत्रहरू कानूनी संस्थालाई मात्र जारी गरिन्छ। जब तपाईं वेबसाइटमा जानुहुन्छ जहाँ एक हरियो रेखा एक कम्पनीको नामको साथ दर्शकमा देखा पर्दछ, यसको मतलब कम्पनीको पूर्ण परीक्षण गरिएको थियो।
बहु डोमेनहरूको लागि स्तर
बहु-डोमेन प्रमाणपत्र आन्तरिक कम्पनी नेटवर्क, मेल सर्भर, होल्डिंग, वा ट्रेडिंग नेटवर्कको लागि उपयुक्त छ। Semalt विशेषज्ञहरु तिनीहरुलाई ब्रान्ड सिफारिस गर्छन् कि धेरै साइटहरु वा subdomains मा पृष्ठहरु को साथ एक वेबसाइट छ। त्यसोभए तपाईं एक प्रमाणपत्रका साथ सबै साइटहरू सुरक्षित गर्नुहुन्छ। पूर्वनिर्धारितद्वारा, बहु-डोमेन प्रमाणपत्रको मूल्य तीन देखि पाँच डोमेन नाम सम्मिलित हुन्छ। तिनीहरूको संख्या बढाउन सकिन्छ। केहि व्यक्तिले एकै समयमा १०० डोमेन वा सबडोमेनहरू सुरक्षित गर्नेछन्। त्यहाँ तीन प्रकारका बहु-डोमेन प्रमाणपत्रहरू छन् - डोमेन प्रमाणिकरणको, संगठन, र हरियो रेखा।
उप-डोमेनहरूको लागि स्तर
सबडोमेन सुरक्षाको साथ प्रमाणपत्र बहु-पृष्ठ कर्पोरेट वेबसाइट, भर्चुअल शप, सामाजिक नेटवर्क, वा ट्रेडिंग नेटवर्क वेबसाइटको मालिकको लागि उपयुक्त छ। Semalt पेशेवरहरूले सिफारिस गर्छन् कि जो एकै समयमा आफ्नो मुख्य डोमेन र सबडोमेनहरू जोगाउन चाहान्छन्, वाइल्डकार्ड प्रमाणपत्र प्रयोग गर्नुहोस्। वाइल्डकार्ड प्रमाणपत्रहरू केवल डोमेन र संगठन प्रमाणीकरणको लागि उपलब्ध छन्। सबडोमेनमा पृष्ठहरूको लागि हरियो रेखा प्राप्त गर्न तपाईलाई या त बहु-डोमेन प्रमाणपत्र वा उन्नत प्रमाणिकरणको साथ धेरै साधारण व्यक्तिहरू आवश्यक पर्दछ।
ग्राहकको वेबसाइटमा SSL कसरी स्थापना गर्ने?
तपाईंले Semalt साथ SSL , हामी तपाईंको खातामा प्रमाणपत्र जारी गर्न अनुरोध सिर्जना गर्नेछौं। यस प्रक्रियालाई सक्रियता भनिन्छ। एक सक्रियता चरणहरू अर्डर प्रमाणिकरण हो। यो एक प्रमाणीकरण प्राधिकारी द्वारा आयोजित गरीन्छ। जब SSL जारी हुन्छ, यसको लागि अझै साइटमा स्थापनाको आवश्यक पर्दछ। Semalt का विशेषज्ञहरु SSL सक्रियण, अर्डर प्रमाणिकरण, र तपाइँको वेबसाइट मा प्रमाणिकरण स्थापना को सम्बन्ध मा तपाइँको सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछ। Semalt ले तपाईंलाई प्रमाणिकरणको प्रकार निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईंको व्यवसायलाई उत्तम सूट गर्दछ। आज नै प्राप्त गर्नका लागि तपाईको अर्डर राख्नुहोस्:
तपाईको वेबसाइट को लागी सुरक्षा;
गुगल क्रोम हरियो लाइन;
तपाईको ग्राहकहरुको गोपनीयता संरक्षण;
तपाईंको वेबसाइटको लागि SSL प्रमाणपत्र (https) को द्रुत स्थापना;
गुगल खोजी ईन्जिनबाट अधिक आगन्तुकहरू।
Semalt ले SSL का तीन संस्करणहरू प्रदान गर्दछ - आधारभूत, मानक र प्रीमियम। तपाइँ हाम्रो वेबसाइटको सम्बन्धित पृष्ठमा स्थापना सर्तहरूसँग परिचित हुन सक्नुहुन्छ। भोलि बढि आम्दानी पाउन आफैलाई र तपाईंको व्यवसायलाई सुरक्षित राख्नुहोस्।